Cellulite: izizathu, iindlela zokulungiswa
Cellulite. Ngokuqhelekileyo eli gama linokubangela intshukumo kwisini esifanelekileyo. Ukufumanisa i-"peel orange" ephawulekayo, umfazi oqhelekileyo ubonisa umzabalazo omkhulu kuzo zonke iindlela ezicingelwayo nezingenakucingwa. Ngaba i-cellulite eyoyikeka kangaka, zeziphi izizathu zokubonakala kwayo kunye nento enokuyenza ukuze unqobe?
Ngokuchasene nentsholongwane eninzi yokuba i-cellulite ibonakala kuphela kwiidodakazi ezipheleleyo, ingayibonisa intombazana encinane kunye nentombazana. Ewe, i-cellulite ifaka iphosa phantsi kwesikhumba. Kodwa kunoko, kuphulwa kwemisebenzi yesikhumba esincinci, ukuhamba kwe-lymphatic flow and circulation. Yintoni ebangela ukuba utshintsho? Okokuqala kuzo zonke izidumbu ze-hormonal. Ixesha eliphambili lomngcipheko wokufumana "i-orange peel" ngethuba lokukhulelwa, ukuthatha iipilisi zokulawula ukuzala, ukukhulelwa nokubeletha, ukuphuma kwesisu. Kubudeni bokuqala ukuba izitenxo ziqale phantsi kwesikhumba. Isizathu sesibini esibangela ukuba i-cellulite yindlela yokuphila. Kule meko, ukujikeleza kwegazi kuphazamiseka, ukuhamba kwemfucuza kunye nezinye iinguqu ezithintekayo zichaphazela kakubi i-fat layer layer. Ingxaki elandelayo kukungondleki. Ukutya kwanamhlanje kuninzi ngamafutha, ishukela kunye nezongezo zamakhemikhali. Igalelo elikhulu elenziwe ngokutya okukhawuleza ngoku ngokukhawuleza. Ayikho indawo yokugqibela ehlala kunye nemikhwa emibi: iicotine, utywala, i-caffeine. Ukuxinezeleka, ubunzima, izambatho ezinqabileyo nezingenakunqwenelekayo kunye nokuba ne-ecology nazo zinempembelelo embi kwimeko yomzimba wethu.
I-cellulite - izizathu, iindlela zokulungiswa. Kukho iindlela ezininzi zokulwa ne-cellulite. Ukuqala ngokunyanga okumangalisayo kunye namafutha kunye nokuphela kokuhlinzwa. Indlela yokuqala yokumelana nokutya okunempilo. Kubalulekile ukukhuphela ngaphandle kokutya okuthosiweyo, izitya ezinamafutha, iipesele, ukutya okutyukisiwe okuhlukahlukeneyo, i-carbohydrates. Amaqabane akho ekulweni ne-cellulite iya kuba yimifuno nezithelo, intlanzi, ivenkile zasemanzini, okusanhlamvu, izityalo, iwayini elibomvu. Kodwa nangayiphi na imeko, iCoca-Cola, ikhofi okanye utywala obunamandla. Ukusetyenziswa kwamanzi amaninzi kuya kuba nefuthe elihle kumfanekiso wakho. Ukususela kwi-1.5-2 ilitha ngosuku ngeminerali okanye ngamanzi aqhelekileyo, unokufumana itiye eluhlaza. Umhlobo wesibini obalulekileyo umzimba. Kukho iinkqubo ezininzi ezilungiselelwe ukuqiniswa kwemisipha, ngokuqhelekileyo azinalo umthwalo womhlaba kwaye uza kuthatha imizuzu eyi-15-20. Ukongezwa okulungileyo kuya kuhlalisa. Kodwa i-massage kufuneka ibe rhoqo kwaye kukho impumelelo enkulu kuxhomekeke kubugcisa bemasseur. Uncedo kakhulu luya kuba isilwanyana esahlukileyo. Ukuba uchukumisa kule ndlela yomzabalazo, njengama-creel anti-cellulite, i-gels ne-scrubs, zinikeza kuphela umphumo obuthathaka, ziphucula imeko yesikhumba, ziyamnandi kwaye zilungele ukusetyenziswa. Iintsimbi ze-Antselljulitnye kunye nee-pantaloon zinika kuphela umphumo wokuba neprophylactic, kwaye i-sock ende iqhuba ukunyuka kwegazi, kwaye, ngokufanelekileyo, ukuphuhliswa okongeziweyo kwe-cellulitis. Iimali kufuneka zihambe ngendlela enzima, rhoqo. Kwaye kubaluleke kakhulu - ukuchonga imbangela yendlela yokubonakala kwe-cellulite. Ukuba ukuhluleka kwe-hormonal, ukutya okanye ukusilalisa akuyi kunika umphumo oyifunayo. Okuphakamileyo kwinqanaba le-cellulite, ingakumbi kwaye ingqiqo kufuneka ibe yindlela ekunyango ngayo. Ngamanye amaxesha awukwazi ukwenza ngaphandle koloncedo lwezokwelapha.
I-Cellulite ayiyona isifo esibulalayo, kubonakala ukuba i-85% yabasetyhini. Ukuba udibanise isikhumba phakathi kwesithupha kunye nesangaphambili, ubone i-tubercles kunye nezitenxo, oku akuthethi ukuba unobungakanani okanye ubunzima bakho bugqithise isiqhelo. Mhlawumbi nje ulwahlula ubomi obuncinane - ubhalise echibini okanye emzimbeni, zama iindlela ezintsha kwi-salon yakho okanye inkosi entsha yokupheka i-salads kwiimifuno ezitsha?
Indlela yokuyiqonda le ngxaki ye-premenstrual syndrome
Yingakho ungeke ulahlekelwe isisindo nangayiphi na indlela: 4 iimpazamo ezibulalayo
Usulelo lwe-Rotovirus emathunjini
Izinketho zobume obugqibeleleyo
Ukuyisa ukushisa, siza kuthenga umoya womoya
I-Yucca - ukungazithobeki ekhaya
Isonka sihamba nge cheddar ushizi
Iibisiki kunye ne-oat flakes kunye necolethi
Indoda ihlale ihlala kwi-intanethi ...
Iimpawu ezintsha ezithakazelisayo nezihlekisayo zoSuku loTitshala esikolweni nakwiikholeji
Ukuqulunqa izitya kubantwana beminyaka yobudala bezikolo
Ngaba kuqhelekile ukuthetha ngawe kumntu wesithathu?
Indlela yokucoca ngokuchanekileyo iinki
I-Autumn trend-2015: iibhegi ezimbini ngakwesandla esinye
Ikhefu "iNapoleon ngendlela yobukhosi"